फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री ट्याग भयो ? यसरि बच्नुस् ! | धादिङ सेरोफेरो : Dhading Serofero - latest news of dhading
Home प्रबिधि बिज्ञान भर्खरैका समाचार ह्याकिंग फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री ट्याग भयो ? यसरि बच्नुस् !
फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री ट्याग भयो ? यसरि बच्नुस् !
10:30:00 AM प्रबिधि , बिज्ञान , भर्खरैका समाचार , ह्याकिंग
केही दिनयता सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा भाइरसका रुपमा अश्लिल सामाग्री प्रसार भइरहेको छ। यसले धेरैलाई लाजमर्नु पनि बनाएको छ। आफ्नो टाइमलाइनमा नदेखिने तर अरुको न्युजफिडमा सजिलै देखा पर्ने यो भाइरसले यसै आक्रमण गर्न सक्दैन, तपाइले अनावश्यक लिन्कहरु खोल्दा त्यो लिन्क स्पाम लिन्क पर्न पनि सक्छ, यस्तो अवस्थामा त्यो अटोमेटेड लिन्क ले तपाइको फेसबुक एकाउन्ट सिदै नियन्त्रणमा लिन सक्छ। त्यसरी यस्तो भाइरसले मानिसको मानमर्यदामा ठूलो असर पार्न सक्छ। तर कसरी जोगिने ?
यसरी जोगिनुस् …
१. यदि कुनै अश्लिल पोस्ट ट्याग भएको थाहा पाउनु भए तत्काल त्यो पोस्ट खोलेर "Remove Tag" गर्नुहोला ।
२. फेसबुक "Log In" गरेपछी मोबाइल बाट "Security and Privacy Setting " अथवा कम्प्युटर बाट " Setting" मा गइ त्यहा भएको "Timeline and Tagging" option Select गर्नुहोला। वा सिदै यहाँ CLICK गर्नुहोला ।
त्यहाँ भएको "Who can add things to my timeline?" लाई "Friends" बनाउनुहोला ताकी यसो गरेमा तपाईको Timeline मा तपाईको Friends ले मात्र पोस्ट गर्न सक्नेछ ।
फेरी त्यही भएको "Review posts friends tag you in before they appear on your timeline?" लाई "On"गर्नुहोला, जस्ले गर्दा कुनै फोटो/पोस्ट Tag हुनुअघी Notification आउद्छ जस्मा तपाइ tag हुनु पहिले नै पोस्ट Add to timeline अथवा Hide गर्न सक्नुहुनेछ।
"Who can see things on my timeline?" option मा भएको "Who can see posts you've been tagged in on your timeline?" लाई "Friends" मा वा "Only Me" मा राख्नुहोला यसो गर्दा तपाई Tag हुनुभएको पोस्टहरु Only me ले तपाइले मात्र देख्ने अरुले नदेख्ने भन्ने बुझाउदछ भने, Friends ले साथिहरु सबैले देख्ने भन्ने बुझाउदछ ।
३. आफुले चलाउने गरेको कम्प्युटरमा रहेको Browser (Chrome/ Firefox/ Opera/ Explorer) को setting मा गइ Session, Cookies file तथा Application data लाई आवश्यकता अनुसार delete/Clear गर्ने गर्नुहोला ।
४. Windows को Run (ctrl+R) मा गइ input field मा %temp% लेखी Enter खिच्ने, नया खुलेको window मा रहेको सबै फाइल delete गर्ने गर्नुहोला ।
माथी उल्लेखित उपाय अपनाउनु भए पक्कै तपाईं फेसबुक मा अश्लिल फोटो,पोस्ट tag हुनबाट अवश्य जोगिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस्ता समस्याबाट आफू मात्र नभइ परिवार, साथिभाई सबैलाई जोगाउनुहोस् ! त्यस्को लागि यो पोस्ट जतिसक्दो Share गरि सबैसामु यो पोस्ट पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला।